Barnaamijka Hordhaca ah ee Xisbiga/Ururka Dadweynaha Somaliland | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Barnaamijka Hordhaca ah ee Xisbiga/Ururka Dadweynaha Somaliland
Barnaamijka Hordhaca ah ee Xisbiga/Ururka Dadweynaha Somaliland
Barnaamijka Hordhaca ah ee Xisbiga/Ururka Dadweynaha Somaliland , S.P.P ( SOMALILAND PEOPLES PARTY )
WQ Maxamed Abdi Jamac
XISBIGA DADWEYNAHA SOMALILAND
BARNAAMIJ SIYAASADEEDKA XISBIGA DADWEYNAHA SOMALILAND ( S.P.P ) OO GUUD MAR AH
HORDHACA QAYBTA 1AAD
Horaanta sanadka 2022 oo ah waqtiga la sugayo in lagu dhawaaqo gudiga diwaangalinta ururada iyo axsaabta siyaasada Somaliland .
20 sano ayaa ka soo wareegay kolkii Somaliland nidaamkeega dimuqaradiyadeed dhidibada loo taagey , waxaana laba goor oo hore la furay ururada siyaasada Somaliland oo kala ahaa sanadkii 2002 iyo 2012 , waxaana ay markii sadexaad ku beegan tahay sanadka 2022.
Dadweynuhu waxay aad ugu heelan yihiin isbeddel siyaasadeed oo mug leh , kuwo badan oo dadkaas ka mid ahina waxay rajadooda ku xidhayaan doorashada tartanka ururada iyo axsaabta jamhuuriyada Somaliland oo ay u arkaan in ay iman karaan ururadii iyo axsaabtii ka turjumeysay ujeedada dastuurka dalka iyo nidaamka dimuqaradiyadeed laga lahaa oo haatan aan muuqan.
Xisbiga/Ururka S.P.P mugdi kagama jiro baaxadda iyo baahiyaha dadka jamhuuriyada Somaliland qabaan , taas ayaana ku qasbaysa in ururku dedaalkiisa laban-laabo si uu dadka u baraarujiyo una dareensiiyo dhibaatooyinka soo fool leh, haseyeshee waxa uu wax walba ka fuudhyeelayaa soo bandhigidda iyo qeexidda barnaamij siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsho oo tifaftiran, kaas oo ay hagayso aragti iyo ujeeddoyin looga gol- leeyahay in lagu higsado nabad waarta, barwaaqo, dimuqraadiyad iyo istraatijaddii xubin lagaga noqon lahaa Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa.
HIMILADA XISBIGA/URURKA S.P.P
Barnaamijka Xisbiga/Ururka S.P.P wuxuu ka turjumayaa xaqiijinta himilooyinka hoos ku xusan?
Xisbiga/Ururka S.P.P wuxuu u hawl-gelayaa xaqiijinta iyo taabbo-gelinta madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland iyo ka mid-noqoshadeeda ururrada caalamiga ah iyadoo ah dawlad la aqoonsan yahay.
Xisbiga/Ururka S.P.P wuxu hiigsanayaa inuu dalkan Somaliland ka dhiso bulsho casri ah oo ka xor ah faqriga, jahliga, dulmiga, keli-talisnimda iyo guud ahaan maamul xumada weji kasta oo ay leedahay;
Xisbiga/Ururka S.P.P wuxu ku naalloonayaa yagleelidda bulsho dimuqraadi ah oo ay saldhig u yihiin mabaadi’da talo-wadaagga ee ka soo jeeda dhaqankeenna suubban , diinteenna Islaamka ah iyo waayo-aragnimada ina anfacaysa ee aynnu ka soo dheegannay horumarka sayniska iyo teknoolajiyada bulshada caalamku ku tallaabsatay;
Xisbiga/Ururka wuxu ku hammiyayaa abuuridda bulsho nabdoon oo u hiilisa sinnaanta, is-xaqdhawrka iyo nabad-ku-wada-noolaanshaha ummadda Somaliland gaar ahaan iyo dadyawga gobolka iyo adduun-weynaha guud ahaan;
Xisbiga/Ururka wuxuu tiigsanayaa xaqiijinta bulsho ka dhiidhida addoonsiga weji kasta oo uu leeyahay iyo nooc kasta oo gumaysi ah, kana dheeraata yasidda, kala-faquuqidda iyo is-qabyaaladaynta;
Si uu u xaqiijiyo himilooyinka kor ku xusan, Xisbiga/Ururka S.P.P wuxuu meel-marinayaa mabaadi’da xukun-wanaagga ee hoos ku qoran?
adeegsiga gole xukuumadeed oo kooban, tayana leh iyadoo xeer jideyn doono jiritaanka wasaarad ama hay’ad kasta oo xukuumadeed, xeerkaas oo caddayn doona xilkeeda, qaab-dhismeedkeeda iyo xidhiidhka ay la leedahay hay’adaha kale ee dawladda;
hirgelinta hannaanka dimuqraadiga ah si waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqankeena suubban ee Soomaaliland iyadoo laga faa’iidaysanayo waayo araganimada waxtarka leh ee dadyawga aduunka ee arrintaas ka midho dhaliyey;
dhiirri-gelinta iyo ka midho-dhalinta nidaamka xisbiyada badan, u-tartanka xorta ah ee hoggaaminta dalka, adkaynta hay’adaha dimuqraadiga iyo ka-qaybgalka dadweynaha ee talada dalka;
la-dagaallanka musuqmaasuqa, qaraaba kiilka iyo eexda;
xoojinta is-ilaalinta iyo is-dheelli-tirka hay’adaha dawladda (check and balance);
meel-marinta madaxbannaynta garsoorka iyo horumarintiisa;
dhiirri-gelinta iyo kobcinta saxaafad xor ah;
dhawridda xuquuqaha aasaasiga iyo xorriyadaha lagama maarmaanka ah ee noolaha jamhuuriyada Somaliland.
meel-marinta iyo horumarinta isla-xisaabtanka iyo xalliibnaanta (accountability and transparency);
xaqdhawridda iyo horumarinta ku-dhaqanka xeerka (respecting and promoting the rule of law);
Horumarinta, xaqdhawridda iyo u-hoggaansanaanta isticmaalka awoodaha cod-bixiyaha iyo cashuur-bixiyaha;
xoojinta iyo horumarinta nidaamka xukun daadejinta (encouragement and development of decentralization);
u-kala xaqsooridda gobolada iyo degmooyinka Somaliland iyo isu dheelitirka qaybsiga khayraadka qaranka;
dhiirri-gelinta iyo ka qayb gelinta beelaha laga tirade a badan yahay iyo haweenka talada dalka;
dhiirri-gelinta wada jirka muwaadiniinta Somaliland iyo u xallinta khilaafaadka si nabddoon;
dhiirri-gelinta deris-wanaagga iyo nabad-ku-wada-noolaanshaha dalalka deriska ah kuwa mandaqadda iyo beesha caalamka.
UJEEDOOYINKA SALDHIGGA AH EE SIYAASADDA DEBEDDA.
Xisbiga/Ururka S.P.P wuxu aaminsan yahay in siyaasadda debeddu ay qayb ka tahay siyaasadda qaran ee dalka, sidaas darteedna tahay qayb muhiim ah oo tilmaamaysa danaha iyo ujeedooyinka istraatiijiga ah ee ummadda.
Nuxurka siyaasadda debedda ee Somaliland waxay tahay inay caalami ahaan horumariso madaxbanaanida dawladda Somaliland, si loo kasbado ictiraaf waxna ula qabsato beelsha caalamka.
Waxa xisbiga/Ururka S.P.P mudnaanta siinayaa siday Somaliland saaxiibo ugu yeelan lahayd Afrika iyo daafaha kale ee adduunka, sababtoo ah, waxan qiraynaa in masuuliyadda hore loogu riixayo madaxbanaanida dadkeenan u harraadan dimuqraadiyada iyo ka mid noqoshadooda beesha caalamku ay si aad ah ugu xidhan tahay hadba sida loo maamulo siyaasdda debedda.
Waxa xisbigaUrurka S.P.P ku dedaalayaa sidii Somaliland go’doonka looga saari lahaa ayna uga mid noqon lahayd beesha caalmka.
taasi waa ujeeddo muhim ah oo khusaysa siyaasdda debedda waana mid si toos ah uga tarjumaysa boholyawga dadkeenu u hayo dimuqraadiyadda, horumarka iyo aayo-ka-tashiga.
MABAADII’DA HAGAYSA ARRIMAHA DEBEDDA:
In siyaasdda Debeddu ahaato mid ka turjumaysa danaha Somaliland
In barwaaqaynta dhaqaale ee Somaliland ku xidhan yahay iskaashi dhaqaale ee heer gobol iyo heer caalami iyo suuqa xorta ah.
Inay siyaasadeena debedda ka muuqato siday inooga go’an tahay inaan dhisno Somaliland dimuqraadi ah.
Inaan isku hawllo in xuquuqaha dadka aanay ku koobnaanin siyaasadda, ee ay gaadhaan dhinacayda dhaqaalaha, bulshada iyo deegaanka.
maamulidda xidhiidhada caalamiga ah ee Somaliland waa inay ahaadaan kuwo muuqda oo sigib tiran (transparent) waxayna dhacayaan iyadoo lagala tashanayo baarlamaanka iyo hay’adaha dawladeed ee ku shuqul leh.
danaha qaranka Somaliland ayaa mar walba hagaya siyaasadeena debedda.
ammaanka iyo tayada nolosha dadka Somaliland, sharciga iyo kala danbaynta, nabadda iyo xasiloonida dhaqaale, iyo iskaashiga goboleed ayaa noqonaya mabaadii”da aasaasiga ah ee ay ku dhismayso siyaasadda arrimaha debedda ee Somaliland marka xisbiga/Ururka S.P.P talada dalka qabto insha Allah.
KA FAAIIDEYSIGA DHIBAATOOYINKA IYO CAQABADAHA SOMALILAND KA HOR YIMID 30 KA SANADOOD EE AY MADAX BANAANIDA HAYSATAY.
Arrinta ictiraafka caalamiga ah ee dawladaha aduunka aynu ku rabnaa waxa loo raaci doonaa qaab wanaagsan iyada oo laga shidaal qaadanayo caqabadihii iyo dhibaatooyinkii inagaga yimid arimaha dibeda mudadaasi iyo waayo aragnimadii aynu ka dhaxalnay.
Xisbiga/Ururka S.P.P waxa uu meesha ka saarayaa gabi ahaan xidhiidhka lala leeyahay Somalia ilaa ay ka dhalanayso Somalia dawlad meeqaam ahaan Somaliland u dhiganta oo dalkeeda maamusha.
Nabadgalyadu maadaama ay tahay aasaaska nolosha aan la’aanteed wax suuragalayaa jirin Xisbiga/Ururka S.P.P waxa uu ka dhigayaa ahmiyada koowaad waxaana uu galin doonaa dedaalka ugu badan tamar iyo tacab ba.
Ammaanka qaranka waxa soo gelaya wax kasta oo wax-yeellayn kara muwaadinka Somaliland.
Xisbiga/Ururka wuxuu ahmiyad siinayaa arrimaha ammaanka qaranka, ilaalinta iyo daryeelidda nabadgelyada muwaadiniinta, gaar ahaan arrimaha saamaynta xun ku leh caafimaadka muwaadiniinta, qiyamka, diinta, waxbarashada iyo guud ahaan suubbanaanta shacbiga , sigib tirnaanta maamulka iwm.
Xisbiga/Ururka wuxuu aaminsan yahay, iyadoo ay ugu wacan tahay adduunkii oo edeg ku wada-jira, isa saamayntiisuna ay maalinba maalinta ka danbaysa soo kordhayso, ayaa waxa lagama maarmaan ah in feejigo la yeesho, iyadoo wixii wanaagsan laga faai’daysanayo, la iskana caabbiyayo wixii dhibaato u leh dhaqanka, diinta, caafimaadka, barbaarinta iyo koboca shakhsiyadda qofka .
Si uu arrimahaas u xaqiijiyo, XIsbiga/Ururku wuxu yeelanayaa siyaasad dhammays-tiran oo uu ku waajaho wixii khuseeya ammaanka qaranka. Sidaa darteed, S.P.P wuxuu dejinayaa, horena u- marinayaa siyaasad dhinacyo badan leh oo ku wajahan ilaalinta ammaanka qaranka.
DIFAACA QARANKA IYO SUGIDDA XUDUUDAHA
Xisbiga/Ururka wuxuu aaminsan yahay in ciidan milateri ah oo adag oo dalkani yeeshaa u yahay sees aasaasi ah xaqiijinta gooni-isu-taagga iyo madax-bannaanidiisa. Sidaa darteed. waxa Xisbigu/Ururku ku talo-jiraa dhisidda ciidan milateri ah oo tayo sare leh kuna fillaada difaaca dalka iyo ilaalintiisa. Si taas loo suurto-geliyo, Xisbigu wuxuu ku tallaabsan doonaa:
in uu isagoo ka duulaya khataraha hor-yaalla, qorsheeyo tirada ciidan ee lagaga hor-tegi karo, tayada uu u baahan yahay (tababar, hub iyo qalabba) iyo sida loogu heli karo;
in ciidamada hada jiro oo tayo iyo tiroba leh oo laban laabo daryeelkooga guud ee ciidanimo iyo daryeelkooga qofeed iyo qoyseedba taasi oo laf dhabar u ah wanaaga iyo horumarka amni ee laga rabo askariga jamhuuriyada Somaliland.
KOBCINTA DHAQAALAHA IYO LA-DAGAALLANKA SABOOLNIMADA:
Xisbiga/Ururka S.P.P wuxuu u arkaa in faqrigu yahay masiibo culus oo Ilaahay laga magan-galo, haddaanay ummaddu u guntan inay wax ka qabsato oo aanay wajihin inay mushkiladdaa isku-duubni kaga baxdana aanay jireyn cid kale oo ka saari kartaa. Sidaa darteed;
Xisbiga/Ururka S.P.P wuxuu ku dedaali doonaa inuu u abaabulo ummadda loo abuuro shaqooyin iyo mashruucyo maal galineed si dadka loogu kala jaheeyo oo la gaadhsiiyo ilaa in qofwaliba maareyn karo nolol maalmeedkiisa iyo ka qoyskiisa.
Xisbiga/Ururka S.P.P isagoo ka duulaya in xoola-dhaqashadu horena u ahayd laf-dhabarka dhaqaalaha dalka, waqtiyada soo socdana ahaan doonto wax-soo-saarka koowaad ee nolosha dadweynaha badankiisu ku tiirsan tahay, tahayna ilaha ugu weyn ee lacagta adagi ka soo hoyan karto ayaa waxa xisbigu mudnaanta kowaad siinayaa kobcinta docda (sektarka) xoolaha, daryeelka deegaanka xooluhu ku sugan yihiin iyo horumarinta xoola-dhaqatada isagoo ku tallaabasanaya arrimaha soo socda:
daryeelka caafimaadka xoolaha;
daryeelka dhul daaqsimeedka;
dhiirri-gelinta dhoofka xoolaha;
helidda iyo horumarinta habab cusub oo looga faaii’daysto cadka iyo caanaha xoolaha;
samaynta wershado lagu farsameeyo walxaha xoolaha ka soo jeeda sida cadka, caanaha, hargaha, dhogorta iyo lafaha;
curinta habab cusub oo loo dhaqo xoolaha;
maaraynta isbeddelada aan qorshaysnayn ee ku socda hanaankii soo jireenka ahaa ee xoolo-dhaqasho ee ku dhisnaa guur-guurka xorta ah;
soo noolaynta seera-daaqsimeedyadii;
helidda ilo tamareed (source of energy) si loo badbaadiyo deegaanka;
qabashada biyo roobaadka (samaynta harooyin iyo biyo-xidheenno);
hakinta biyaha iyo joojinta boholaha/jeex-jeexyada);
hakinta qulqulka ay dadka miyigu ku soo gelayaan magaalooyinka;
ku tallaabsiga cilmibaadhisyo ku wajahan daraasadda hanaanka xoola-dhaqasho;
samaynta machadyo lagu barto dhinacyada kala duwan ee cilmiga xoolaha.
Beeruhu waa wax-soo-saarka labaad ee dalka Soomaliland, Xisbiga/Ururku wuxuu ogsoon yahay in Somaliland tahay meelaha dhifka ah ee adduunka ku haboon wax beerashada marka aad eegto dhulka iyo cimiladaba.
Xisbigu/Ururku waxa u ajande ah dhiirri-gelinta wax-soo-saarka beeraha, beer roobaadyada iyo beer waraabyadaba, iyo baridda beeraleyda dalagga ku habboon cimilada dalkan;
siinta beeralayda qalabka iyo khibradda ay u baahan tahay;
dhiirri-gelinta ururro iyo iskaashatooyin ay isugu tagaan beeraleydu;
dhiirri-gelinta samaynta wershado yar-yar oo miira saliidaha midhaha iyo xabkaha iyo kuwo qasacadeeya khudaarta iyo suuq u raadintooda ;
Adeegsiga Jaamacadaha iyo dugsiyada beeraha si loo gaadho mustaqbalka umad dhinacwalba isaga filan.
Xisbiga/Ururku isagoo ka dhaqaaqaya dareenka ah in bulshada reer Somaliland tahay bulsho ganacsiyeed iyo wax isku-doorsi ayaa wuxu ku tallaabsanayaa:
dhiirri-gelinta ganacsi ku fadhiya suuqa xorta ah;
awoodsiinta rug ganacsi oo uruurisa una sahan tagta ganacsatada reer Somaliland;
u-hawl-gelidda sidii Somaliland u noqon lahayd albaabkii iyo biriijkii Geeska Afrika ku xidhayey dunida inteeda kale;
soo jiidashada maalgashiga shisheeye.
horumarinta adeegyada aasaasiga ah sida waddooyinka, isgaadhsiinta (basic infrastructure);
ballaadhinta iyo casriyeynta dekedaha dalka iyo dhisida dekedo kale si aynu ula beretano dalalka iyo dekedaha ka jira mandaqadda .
dhiirri-gelinta abuuritaanka baanan ganacsi oo gaar loo leeyahay iyo kuwo wadaag ahba;
DHIIRRI-GELINTA KA FAAI’IDAYSIGA KHAYRAADKA KALE:
Waxa xisbiga/Ururka S.P.P diiradda saarayaa ka faa’iidaysiga iyo abuuridda ilo cusub oo dhaqaale kuwaas oo ay ugu horeeyaan:
ilaalinta, dhawrista iyo si san uga faaii’daysiga khayraadka badda;
Sahaminta macdanta iyo shidaalka;
Sahaminta gaasta dabiiciga ah
sahaminta khayraadka biyaha, qabashada biyo roobaadka, samaynta biyo-xidheeno, harooyin iyo balliyo.
Xisbiga/Ururka S.P.P waxa u qorsheysan la dagaalanka musuqa nooc kasta oo uu yahayba waxaana la mideyn doona hay’adaha maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqa dhamaantood iyada oo loo sameyn doono sharciyad adag.
dejinta siyaasad maaliyadeed oo lagu xakameeyo musuqmaasuqa oo fulinteedu ka timaaddo kor ila hoos;
dejinta nidaam maaliyadeed oo lagu ogaan karo xatooyada iyo wax-is-weydaarinta, heer kasta oo shaqo, laga bilaabo madaxtooyada ilaa heerka ugu hooseeya ee wax-soo-saar ama isticmaal hanti ummadeed;
dejinta xeerka la dagaallanka musuqmaasuqa oo suurto-geliya in la baadho dembi lagu oogo, cidda lagu helena xabsi dheer looga heli karo iyo dib-u-soo celin hantida ku maqnaata sida la- wareegid hantida uu ka meelaystay shaqada ama horeba uu u lahaa si looga gooyo hantida ku maqnaata;
Dabagalka hantidii umadani laga dhacay iyada oo qalinka lagu xaday , waxii ay lahaayeen dadkaasi duruufaha dagaalada iyo xaaladaha adag ka soo doogay ee saboolka ah , musuqu kaliya maaha lunsi ee waxaa soo hoos galaya si xun u maamulida hantida guud ee qaran wada leeyahay.
u-madax-bannaynta gudashada xilkiisa xafiiska Hantidhawraha Guud .
Dhalinyaradu waa mustaqbalka iyo hantida uu dalkani leeyahay hagaajintooda iyo raadinta xuquuqahoogu waxa weeyaan hagaajinta mustaqbalka umadan tacabka badan u soo gashay helida dawladnimo wanaagsan.
Waxaana Xisbiga/Uruku qaadayaa talaanooyinkan ;
dhiirri-gelinta isboortiga iyo ciyaaraha;
dhisidda garoomo lagu ciyaaro isboortiga;
dhiirri-gelinta waxbarashada guud ahaan.
Xisbiga/Ururka S.P.P wuxuu u arkaa in caddaladdu tahay aasaaska nabadda, barwaaqada, midnimada iyo horumarka ummadda. Sidaa darteed, wuxuu ku tallaabsan doonaa sidii caddaaladdu u noqon lahayd mid ummadda wada deeqda.
Xisbiga/Ururka S.P.P wuxuu aaminsan yahay in garsoorku yahay halkii sixi lahayd caddaalad darro kasta oo dhacda ama cidi tirsato.
Si garsoorku u gudan karo mas’uliyaddaa ahmiyadda weyn leh, waa inuu yahay loona arko inuu yahay mid dhex u ah dhinacyada uu u garnaqayo isla markaana haysta imkaaniyaadka kale ee lagama maarmaanka u ah , sida madax banaani qanuuni ah .
Xisbiga/Ururka S.P.P wuxuu u arkaa in garsoorku noqon karo mid dhex u ah dhinacyada uu u gar-naqayo keliya marka uu ka madax-bannaan yahay dhinacyadaa. Sidaa darteed, Xisbigu/Ururka wuxuu xaqiijin doonaa in garsoorku helo madax-bannaaani dhammays-tiran hay’ad ahaan (institutional independence) iyo garsooreyaal ahaan (individual or decisional independence). Si taas loo suurto-geliyo,
Xisbiga/Ururka S.P.P wuxuu:
soo-jeedin doonaa in dastuurka lagu sameeyo dib-u-eegis si loo helo wax-ka-beddel dastuur oo garsoorka siiya madax-bannaani dhammays-tiran; madax-bannaanidaas waxa lagu xaqiijin karaa:
Xisbiga/Ururku waxa uu aaminsan yahay si dimuqaradiyada iyo metelaada shacabka jamhuuriyada Somaliland u noqoto mid dhab ah in dalka loo badelo nidaamka loo yaqaano ( parliamentary system ) si qofkasta oo muwaadin ahi qaranka u hogaamin karo isla markaana isla xisaabtanka iyo is miisaamida hay’adaha qaranku u noqoto mid sigib tiran.
…… la soco qaybta 2aad
Xisbiga/Ururka Dadweynaha Somaliland
Maxamed cabdi jama
Previous articleDawladda Imaaraadka Carabta Oo Ganacsade Maxamed Aw Siciid Siisay “Golden VISA
Next articleItoobiya oo si kulul uga jawaabtay eedayn Maraykanku u soo jeediyay